फंक्शन र मोटरसाइकल विन्डशील्डको चयन
१ 197 66 मा, बीएमडब्ल्यूले आर १०० आरएसमा निश्चित विन्डशील्ड स्थापना गर्न नेतृत्व गर्यो, जसले मोटरसाइकल उद्योगको ध्यानाकर्षण गर्‍यो। त्यसबेलादेखि विन्डशिल्ड व्यापक रूपमा अपनाइएको छ। विन्डशील्डको भूमिका सवारीको आकारलाई अझ सुन्दर बनाउने, वायु पुनः घटाउने ...
मोटरसाइकल भ्रमण: १० कारण किन तपाईंलाई विन्डशिल्ड चाहिन्छ
१. हावा संरक्षण कारण नम्बर १ एक दिमाग नभएको जस्तो देखिन्छ। मेरो भनाइको मतलब यो हो कि तिनीहरू हावाबाट तपाईंलाई बचाउनको लागि डिजाइन गरिएको हो। तिनीहरू तपाईंको मोटरसाइकल वरिपरि आउँदै गरेको हावा फैलाउन र अर्ननको लागि डिजाइन गरिएका छन् ...
२०-०5-२5 मा प्रशासक द्वारा
COMFORT: WIND सुरक्षा! हावा संरक्षण विन्डशिल्ड्सले तपाईंको अनुहार र छातीमा हावा विस्फोट हटाएर थकान, कम्मर दुखाइ, र पाखुराको तनावलाई रोक्न मद्दत गर्दछ। कम हावा तपाईंको शरीरको विरुद्ध धकेल्छ, अधिक आरामदायक र रमाईलो सवारीमा परिणाम दिन्छ। हाम्रो विन्डस्क्रीनको अनौंठो लाइन ...
यो व्यावहारिक छ! व्यावहारिक घट्ने हावा ब्लास्टले सवारी थकान कम गर्दछ। यो सजिलो छ। चाहे यो लामो आइतवार क्रूज हो वा एक हप्ता लामो यात्रा, सतर्क रहनु र काठीमा राम्रोसँग कन्डिशन्ड राख्नु तपाईलाई एकै टुक्रामा आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न मद्दत गर्दछ। Insert w ...
फिचर गरिएका उत्पादहरू - साइटम्याप प्यूजोट जाj्गो स्कूलब्याग र्याक, मोटरसाइकल फुट क्लच पेडल, मोटरसाइकल ग्यास पेडल, मोटरसाइकल रोड पेडलहरू, मोटरसाइकल मिश्र धातु पेडल, मोटरसाइकल रोड साइकलिंग पेडलहरू,